के तपाईंलाई राहु दोषको कारण काम तथा धन सम्पत्तिमा समस्या देखियो ? यो पढ्नुहोस् र चिन्ता बाट मुक्ति पाउनुहोस् !!! – Khabar Chautari
के तपाईंलाई राहु दोषको कारण काम तथा धन सम्पत्तिमा समस्या देखियो ? यो पढ्नुहोस् र चिन्ता बाट मुक्ति पाउनुहोस् !!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष १७, २०७७ समय: ७:२३:४७
जब कुनै ग्रह एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्दछ, त्यसको राम्रो र नराम्रो दुबै प्रभाव १२ वटै राशिमा पर्ने गर्दछ।यो नयाँ वर्ष २०२० मा राहुपनि राशि परिवर्तन गर्दैछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार, राहु एक क्रूर ग्रह हो। राहुको अशुभ प्रभावका कारण कुनै तरिकाको मानसिक र शारीरिक कष्ट सहनु पर्ने हुन सक्छ।
यो नयाँ वर्षको शुरुवातबाट २३ सेप्टेम्बर २०२० विहान ८ः३५ सम्म राहु मिथुन राशिमा विराजमान हुनेछन् । त्यसपछि राहु मिथुन राशिबाट निस्किएर वृष राशिमा गोचर हुनेछन् । राहुको यो राशि परिवर्तनले सबै राशिमा प्रभाव पार्ने गर्दछ ।तनाव नलिनुहोस, अपनाउनुहोस यी उपाय
ससुराली पक्षसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर राख्न सके असल फल मिल्नेछ।निधारमा चन्दन या केसर तिलक लगाउनुहोस् ।नरिवलको रुखमा जल चढाउनुहोस् ।तीलाई खाना ख्वाउनुहोस् ।शौचालय, भर्याङ्ग र स्नानघर सफा गर्नुहोस् ।भोजन कक्षमा नै भोजन गर्नुहोस् ।मासु र मदिराबाट टाढा रहनुहोस् ।भैरव महाराजलाई काँचो दूध या रक्सी चढाउनुहोस् ।बिहिबार व्रत राख्नुहोस् ।दैनिक हनुमान चालिसा पढ्नुहोस् ।
यो पनि :वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा कहिले नराख्नुहोस् यी चिज नत्र सधैं हुनेछ धनको कमी !!!वास्तुशास्त्रअनुसार कुनै बस्तु घरमा वा व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउमा राख्दा नफाप्ने हुन्छ। यी ६ चिज तपाइको घरमा वा व्यापार गर्ने ठाउँमा छ भने तुरुन्त हटाईहाल्नुहोस्।यी चिजहरु घरमा राख्दा आर्थिक समस्याबाट कहिले मुक्ति पाउन सक्दैन। हरेक दिन कुनै न कुनै समस्याले घेरीरहन्छ।
के-के हुन ती ६ चीज ?:१.नटराजको मुर्ति नटराजको मुर्तिमा भगवान शिव ताण्डव नृत्यको रुपमा हुनु हुन्छ । जुन विनाशको सूचक मानिन्छ । त्यसैले घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ ।२. ताजमहलको तस्बिर ताजमहल सुन्दर हुनुको साथ-साथै चिहान पनि हो । ताजमहल मृत्युसंग जोडिएको छ त्यसैले यस्को तस्बिर वा प्रतिक घरमा राख्नु हुदैन ।
३. डुब्न लागेको जहाज पानीमा डुब्न लागेको जुन सुकै बस्तु वास्तुशास्त्रअनुसार अशुभ मानिन्छ । घर सजाउन राखिएको पानीजहाजको तस्बिर तपाइको घरको सोभा बढाउनुको सट्टा घट्न सक्छ। आर्थिक समस्या आउन सक्छ त्यसैले पानीजहाजको तस्बिर वा प्रतिक घरमा राख्नुहोस्।४.जंगली जनावरघर सजाउने बहानामा हामी ह्रिंसक जंगली जनावरको तस्बिर राख्ने गर्छौ। यस्ता जनावरको तस्बिर घरमा राख्दा मानिसको स्वभाव पनि उस्तै हुने गर्छ।
५.महाभारत र ग्रन्थमहाभारत पुजनीय ग्रन्थ हो। तर यसलाई घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ। यो पारिवारिक झगडाको कहानी हो। यसलाई घरमा राख्दा घरमा झैँ झगडा बढ्ने, तनाव बढ्ने हुन्छ।६. शंखको साथमा रथरथ युद्धमा उपयोग हुने बस्तु हो भने शंख युद्ध शुरु हुन लाग्दा बजाईन्छ। त्यसैले यी दुइ बस्तुसंगै राख्नु हुदैन। यसले घरमा अशान्ति पैदा गर्ने गर्छ।
यो पनि :मुक्तिनाथ मन्दिरमा रहेका १०८ धाराको धर्मिक महत्व !:मुस्ताङमा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिर हिन्दुहरुको पवित्र थलो हो । यो समुन्द्री सतह देखि लगभग ३८०० मिटर उचाइमा छ । हिन्दु र बौद्धमार्गि दुबैको साझा तिर्थको रुपमा पनि लिइन्छ । बर्सेनी लाखौंको भिड लाग्छ । मन्दिर दर्शन गरेर त्यहाँको १०८ धारामा नुहाएमा पाप पखालिने र शुद्ध भइने जनविश्वास छ । मुल मन्दिरभित्रको एउटै शीलालाई हिन्दु र बौद्धमार्गीले आ–आफ्नै ढँगले व्याख्या र पूजा गर्छन । हिन्दु मुल मूर्तिलाई बिष्णुका रुपमा पुज्छन् ।
बिष्णुका दायाँ बायाँका मूर्तिलाई लक्ष्मी र सरस्वती मान्छन् । बौद्धमार्गी पूजारी झुमा मुल मूर्तिलाई लुवाङ ग्याल्बो अर्थात नाग राजा मानेर पूज्छन् । अनि लुवाङको दायाँ बायाँका मूर्तिलाई नागदेवी भनेर धुप धुँवार गर्छन । हिन्दु मान्यता अनुसार मुक्ति प्राप्तिका लागि उहिल्यै ब्रह्माले मुक्तिनाथमा योगरुप यज्ञ गरेका थिए । त्यसबाट उनले सृष्टि गर्न शक्ति पाए ।
यज्ञ गर्दा अग्निरुपमा शिव, जलरुपमा बिष्णु र होताको रुपमा ब्रम्हा बसेका पछि तिनै देवता त्यहीँ बसे । त्यहाँका कुण्डहरुको जलबाट १०८ धारा बनाइएको मानिन्छ । बौद्धमार्गीको भनाई चाहिँ फरक छ । उहिल्यै भारतबाट ८० जना बौद्धमार्गि पण्डित कैलाश पर्वत दर्शन गर्न गएका थिए ।
फर्किँदा उनीहरुले कैलाशको जल लिएर आए। त्यो जल मुक्तिनाथमा सञ्चय गरेछन। त्यसबाटै १०८ धारा बनाइयो। मुक्तिनाथमा प्राचीन नरसिंह गुम्बा छ। गुम्बाभित्र गुरु पद्धमसंभवको मूर्ति छ।
उनी तिब्बत जाँदा केही समय मुक्तिनाथमा ध्यानमा बसेका थिए। त्यहाँ अरु गुम्बा र ज्वालामाई मन्दिर पनि छन् । मन्दिर हातामा ढुँगै ढुँगाको शाक्यमुनि बुद्ध र रानीपौवा बजारमाथि गुरु पद्मसंभवको अजंगको मूर्ति बनाइएको छ ।